Mpanamboatra sy mpamatsy fivoriambe ao Welding | ZHJ
Ny fanahafana ny Assembly Welding dia mampihena ny vidiny mandritra ny dingana samihafa amin'ny fampivoarana ny vokatra, toy ny famolavolana, ny famolavolana drafitra, ny fanandramana ary ny fanamarinana amin'ny fanamboarana.
Manafatra milina fanamafisam-peo B-5000 avy any Bihler any Alemana isika, afaka manamboatra 200-300pcs isa-minitra.
Dingana roa no ampiasaina amin'ny fantsom-pifandraisana: ny singa mifandraika tsirairay dia miraikitra amin'ny kofehy fitaterana na efa nasiana tombo-kase na ny faritra mifandray aminy vita amin'ny hajia vita amina tapa-vita efa vita miaraka amin'ireo fitaovam-pifandraisana efa napetraka. Mandritra ny fantsom-pandrefesana ireo singa mifandraika dia mifamatotra na ny mombamomba na horonam-peo (kasety), ny tariby na ny endrika tendrony. Ny haben'ny faritra ifandraisan'ny olona indrindra amin'ny fikajiana avo lenta ary mitazona ny fandeferana amin'ny famokarana akaiky dia 5 x 5 mm².
Miankina amin'ny volamena, palladium na volafotsy ny fitaovana fampifandraisana ampiasaina. Mba hampiasa ny fizotran'ny fanamboarana azo antoka sy ara-toekarena indrindra dia matetika ny fitaovana fampifandraisana dia azo zahana mora azo.
Esory ny famolavolana uncoiling-strip-Pre punching-Coin ary ny fanenjehana farany
Ny hatevin'ny soritra
AG, AgNi, AgCu, AgFe, sns.
Mifandraisa amin'ny savaivony tariby
Andin-tariby mihombo ≥ Mifandraika amin'ny tariby tariby） l Mandahatra fantsom-pifandraisana≥1 / 2Mampifandray ny tariby）
Ireo faritra nasiana tombo-kase miaraka amina kofehin'ny semi-vita
Ny ampahany misy tombo-kase avy amin'ny tsipika fifandraisana efa vita dia vita ara-toekarena avy amin'ny tsipika mitohy. Ireo akora mifandraika novokarina tao amin'ireo toeram-pivarotantsika dia mifototra amin'ny volamena, paladium ary volafotsy. Alloys varahina sy varahina dia ampiasaina ho fitaovana fitaterana fototra.
Fampiharana fifandraisana marobe no mitaky sosona vy sarobidy kokoa. Ireo dia tsy azo ampiharina amin'ny substrates ara-toekarena amin'ny alàlan'ny fizotran'ny electroplating. Ho fanampin'izany ireo fitaovam-pifandraisana izay manana toetra ara-batana sy mekanika tena manokana dia takiana matetika. Ireo fitaovana avy amin'ny firavaka volamena-palladium na mifototra amin'ny volafotsy dia vita tamin'ny alàlan'ny fanalefahana firaka na ny metallurgy vovoka. Ny fampifangaroana ny fifandraisana sy ny fitaovana ifotony dia tanterahina amin'ny alàlan'ny fizotran'ny paikady toy ny rojo mangatsiaka na fifamatorana mafana.
Misy tombo-kase avy amin'ny Toplay Profiles
Ny DODUCO dia manamboatra bimetal fifandraisana amin'ny endrika strip amin'ny alàlan'ny famonoana tadivavarana miendrika flator amin'ny fitaovan'ny mpitatitra arahin'ireny profil mihodina. Ireo no fototry ny faritra ifandraisan'ny mpanjifa miaraka amin'ny fizarana metaly sarobidy ho an'ny fampiharana mitaky be.
Nasiana tombo-kase avy amin'ny kofehy vita amina vy
Ny tombony lehibe azo avy amin'ny fantsom-bozaka nohosorana seam ho an'ny famokarana stampings amin'ny fifandraisana dia ny faritra voafetra amin'ny faritra las. Izany dia miteraka fanalefahana ny fitaovana mafy amin'ny lohataona ao amin'ny faritra misy vokariny avy hatrany. Ny sosona fifampikasohana dia misy akora mifamatotra mafy na piraofilina mifandray.
Previous: Riveting Assembly
Manaraka: Fifandraisana bokotra welding
Mifandraisa fivorian'ny AC contactor
Mifandraisa amin'ny Assemblies ho an'ny MCCB